Rangano remapenzi: ndiani akarinyora, zvarinoreva uye kuda kuziva | Zvazvino Zvinyorwa
Iko kusanganisa kweececiuos
Wakamboverenga here Iko kusanganisa kweececiuos? Unoziva here kuti iri nezvei? Zvichida inguva iyo iwe yaunoverenga nyaya mauri kuyera kuti vanhu vaigara sei uye maitirwo azvino, chinyorwa chinosanganisira kutsoropodza kwenzanga nemunyori uyo akanzwawo kusakwana.
Saka tiri kuzokurondedzera, hongu tisina kukuudza mugumo, zvese zvauchazowana mubhuku iri.
1 Ndiani akanyora rangano yemapenzi
2 Chii chiri kurangana kwemapenzi pamusoro
2.1 Mhedziso yebhuku
3 Ndeupi mutoo uye chimiro icho chine
Ndiani akanyora rangano yemapenzi
Munyori kuna avo vatine chikwereti Kurangana kwemapenzi ndiJohn Kennedy Toole. Akazvarwa muNew Orleans muna 1937 ndokufa makore makumi matatu nerimwe gare gare, muna 31. Bhuku rake harina kuburitswa achiri mupenyu, asi rakaburitswa mushure mekufa (muna 1969) uye ndokutora Mubayiro wePulitzer wenhema muna 1980.
John aive mwanakomana waJohn naThelma Toole, vabereki vanodzivirira zvakanyanya kumwanakomana wavo, kunyanya amai vake, vaisakwanisa kumutendera kuti atambe nevamwe vana. Izvo zvakamuita kuti atendeukire kuzvidzidzo zvake uye aive mudzidzi wemuenzaniso. Akapedza kudzidza paTulane University uye akapedza BA muChirungu kuColumbia. Mushure meizvozvo, akatanga kushanda semubatsiri purofesa weChirungu kuYunivhesiti yeSouthwestern Louisiana kwegore.
Kubva ipapo akaenda kuNew York, kunotora chinzvimbo chekudzidzisa kuHunter College.
Zvisinei, haana kurasikirwa nebasa rake rekudzidzira, sezvo akaedza kuwana chiremba. Nekudaro, aifanira kuenda kuuto, kwaakapedza makore maviri achidzidzisa Chirungu kune vanotaura chiSpanish, zvakaita kuti arege.
Paakadzoka kubva kuhondo, akanogara kuNew Orleans kwaaigara nevabereki vake ndokutanga kushanda kuDominican College. Nekudaro, iye zvakare akabatsira shamwari dzake (semuenzaniso nekutengesa tamales) kana, mushure mekupedza zvidzidzo nerukudzo kubva kuYunivhesiti yeTulane, achishanda mufekitori yezvipfeko zvevarume.
Zvese izvi akazvitora mubhuku rake, Kurangana kweVapenzi, uye paakapedza akazvitumira kuimba yekutsikisa yeSimon & Schuster. Asi izvi zvakarambwa nekuti "zvaive zvisiri zvechokwadi nezve chero chinhu." Ipapo Toole akatanga kuora moyo. Akatora kunwa, akamira kushanda uye akapedzisira azviuraya aine makore makumi matatu nerimwe.
Waive mai vake avo vakabva varwira munhu wekuverenga basa remwana wavo. Uye kuti mumwe munhu aive Walker Percy uyo, akaneta nekumanikidza, akazviita, achifadzwa nebhuku. Saka, Percy ndiye aive sumo kubhuku iri. Nekuda kwekubudirira uku, rimwe bhuku rakanunurwa rakanyorwa nemunyori aine makore gumi nematanhatu, uye iro raaifunga kunge rakaipa, The Neon Bible.
Chii chiri kurangana kwemapenzi pamusoro
MuChirongwa cheMapenzi iwe uchasangana ne mutambi, Ignatius J. Reilly. Uyu murume akakanganisa uye anachronist. Aizoda kurarama nenzira yepakati, nenzira dzake dzekurarama, hunhu hwake, nezvimwe. Naizvozvo, kuti nyika yese inzwe, anoita sarudzo yekunyora mazana emabhuku ekunyorera kwaanopa pachena kuzviono zvepasi. Rimwe nerimwe remabhuku ekunyorera rinotora nzvimbo mukamuri rake, zvisina kurongeka, kunyangwe aine chinangwa chakasimba chekuodhaira. Rimwe zuva.
Kwaari, basa chinhu chakashata kwazvo, chimwe chinhu chinofanirwa kutambura nekuti nyika ndeye capitalist uye iyo yaanoona senge rudzi rwehuranda. Saka anoguma achizvienzanisa naBoethius (uyo akabvuma kuurayiwa kwake) uye anotanga kutsvaga wekurarama. Uye kubva ipapo, nyaya yakarukwa kuti, kunyangwe ichizokuita kuseka zvakanyanya, ichakuratidzawo nenzira yekuwedzeredza, zvakaita nzanga yanhasi: nehunhu hwayo, hutsinye, kusuwa ...
Muchidimbu, hongu, iwe uchaseka pamwe nebhuku, asi iwe uchanzwawo urombo kuona kuti nyika yave sei uye kuti izvi zvisati zvave zvakadaro, uye haina kutongwa nemisimboti izvozvi zvinoita sekunge isu tese takateedzera ku «chinja" uye uve mumwe wevanhu.
Heino chirevo chayo:
Iko Kusangana Kwemapenzi ndeye mapenzi, asidhi uye ane hungwaru ruzivo. Asi kwete izvo chete, zvakare zvinonakidza uye zvinorwadza panguva imwe chete. Kuseka kunopukunyuka pachawo pamberi pezviitiko zvisingaenzaniswi zveiyi tragicomedy huru. Ignatius J. Chaizvoizvo ndiye mumwe wevatambi vakanakisa vakambogadzirwa uye vasingazeze kuenzanisa naDon Quixote. Kupfuurirazve, iye ndiye antiprotagonist akakwana wenhau izere nemhando yepamusoro vatambi, vakagadzwa muguta rechiteshi cheNew Orleans, nyanzvi Ignatius.
Haanzwisisike, munhu ane makore makumi matatu ekuberekwa anogara mumba maamai vake uye anotambura kuti awane nyika iri nani kubva mukati mekamuri yake. Asi zvine utsinye achazvuzvurudzwa kudzungaira mumigwagwa yeNew Orleans achitsvaga basa, akamanikidzwa kupinda munharaunda, yaanochengetedza hukama hwehukama hwehukama, kuti akwanise kubhadhara mari yakakonzerwa naamai vake mutsaona yemotokari apo Ini ndaityaira ndakadhakwa. Munyori, John K. Toole, anowana ongororo yepakati nepakati.
Iyo inokwanisa kuchengetedza kufarira kwemuverengi (zvakatokura mukuverengwa kwechipiri kupfuura kwekutanga) ine huwandu hwevatambi vasinganyanyi kufadza. Haasiye chidzoyi chine musoro uye, kuburikidza nehunhu hwaIgnatius hunyengeri uye hwakagunun'una, anopa ongororo yenguva yaakararama nezwi rekuseka iro rinopesana nechiono chinosuruvarisa cheupenyu hwevatambi vanoratidzwa. Isu hatingowana chete nyaya inopenga uye inoshungurudza yekushoropodzwa munharaunda, asi zano racho rinorembera kubva pakutanga. Nguva iyo, sekutaura kwayo protagonist, Fortuna anotenderedza vhiri rake pasi uye isu hatimbozive kushamisika kusingafadzi uko ramangwana ratakachengeterwa.
Kubva pano, mamwe mamiriro anokwenenzverwa nevamwe, sezvinoita vatambi, uye hombe snowball inoumbwa inozopedzisira yaputika pakupera kweruzivo. Mushure mekupedza La Conjura De Los Focios, pazera remakore makumi matatu nemaviri, munyori haana kubudirira kuita kuti ibudiswe. Izvi zvakakonzera kushushikana kwakadzama kwakatungamira kuzviuraya. Kutenda kusimba uye kuomerera kwaamai vake, nhasi tinogona kunakidzwa nebasa rinonaka iri rakapihwa Pulitzer Prize. Tinogona zvakare kuwana Iyo Neon Bhaibheri rakaburitswa, inoverengeka yakanyorwa apo munyori aive nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa.
Ndeupi mutoo uye chimiro icho chine
Iyo novel yakakamurwa kuita zvitsauko, izvo zvakare zvakakamurwa kuita zvitsauko-zvitsauko. Vose zvavo Ivo vari mumunhu wechitatu uye irony yacho chikamu chechinyorwa. Zvisinei, kune zvimwe zvikamu zvaunokwanisa kuverenga mumunhu wekutanga, chiri chiratidzo chaIgnatius. Izvi zvinobatsira kunzwisisa zvese hunhu uye nyaya yacho pachayo. Aya ndiwo mamwe emabhuku ekunyorera aanonyora, pamwe netsamba dzaanonyora neshamwari yake, Myrna Minkoff, uyo waanorwisana naye nechiono chake chenyika, asi panguva imwecheteyo anonzwa kuti anochipedza.
Vakawanda vanofunga izvozvo nyaya yeChirongwa cheMapenzi ine zvakawanda zvehupenyu hwaJohn Kennedy Toole, iyo inouya kuratidza zvikamu zveyake nyaya, kwete chete nekuda kwenzvimbo yemunhu, asiwo nekuda kwemabasa akasiyana aanoita, kana nekuda kwehukama hwaanahwo naamai vake. Kunyangwe icho chishuwo nekuti izvo zvaanonyora zvinoshandura kuchinja chokwadi kana nyika.
Iye zvino zvaunoziva zvirinani kurangana kwemapenzi, iwe uchaona kuti ingano isingagumi, iyo inogona kushandiswa munharaunda ino uye zvekare kana zvekare, uye kuti hunhu pachahwo hunoita kuti utarisane nechiono chake. , inoshamisa uye ine hutsinye, yenyika. Zvino, kuti anga achitaura chokwadi here kana kwete zvinongoenderana nemaonero ako. Wakamboiverenga here? Ungaedza here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Iko kusanganisa kweececiuos
Kune avo Bhero Rinobhadhara